Xaafad ku taala Göteborg oo boolisku ka cabaadeen, sababtu maxeey tahay? | Somaliska
Nolosha / Somaliska
Xaafad ku taala Göteborg oo boolisku ka cabaadeen, sababtu maxeey tahay?
Inkastoo magaaladda Göteborg ay mar sii horeeysay aheyd magaalo ay falal dambiyeed dilal ahi ka dhaceen, hadana bilihii ugu dambeeyey waxaa yaraaday dilalkii qorsheeysnaa. Saas oo ay tahayn weli waxaa jira cabsi ay dadku qabaan in duunfta magaaladda Malmö ay soo gasho.
Idaacadda raadiyo Iswiidhan ayaa shaacisay in booliska Göteborg baaritaano ay sameeyeen lugu sheegay in kooxaha qas wadayaalka ahi awoodii ka xayuubiyeen booliska ammaanka. Booliska ayaa sheegay in arrintani ay ka dambeeyaan kooxo gaar ah.
Ulf Merlander waa madaxda booliska xaafadda angered, waxaa uu sheegay mar uu la hadlayey idaacadda in isaga laftiisa ay dhalinyaraddaasi xaafadda u sheegeen in booliska aaneey awood ku laheyn xaafadda oo ay iyaga gacanta ku hayaan. Ulf waxaa kale oo uu sheegay in aaminsan yahay inkooxahaasi ay ka dambeeyaan rabashada ka dhaca xaafadda tan iyo 1990-meeydii. Kooxdan ayaa ka kooban sida Ulf sheegayo 120 ruux oo soddon ka mid ahi ay xabsiyada jiifaan.
Dhinaca kale waxaa magaaladda ka socda kiis maxkamadeed oo lugu soo saaray dhowr qof oo la tuhmayo ineey ka dambeeyeen jir dil loo geeystay dad maxkamada ku marqaati furi lahaa. Waxaana lugu tuhunsan yahay afar nin oo farta lugu fiiqay iney jir dilkaasi geeysteen. Ugu dambeyntiina Ulf waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in awooda booliska kala wareego gacanta kooxaha qas wada yaalka ah.
Booliska oo lagu dhaawacay Rinkeby
Dadkii Sweden qaxootiga ku soo galay oo faqiirnimo ku nool